Fotoam-piotazana letisia 2019: mihena ny vokatra aondrana amin’ity taona ity | NewsMada
Fotoam-piotazana letisia 2019: mihena ny vokatra aondrana amin’ity taona ity
Hanomboka amin’ny 17 novambra ho avy izao ny fotoam-piotazana letisia any amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Fanapahan-kevitra niombonan’ny mpandraharaha miaraka amin’ny minisitera manana andraikitra mifanandrify amin’ny (fambolena, fitaterana, varotra). Mihena ny vokatra aondrana amin’ity taona ity, tombanana 17 000 t, raha nisy 18 000 t tamin’ny taon-dasa. Maromaro ny antony mampihena ny vokatra ankapobeny, toy ny fiovan’ny toetr’andro mahatonga tsy fahampian’ny orana ; ny tsy fisian’ny fikarakarana ny fambolena, na ny fanavaozana izany, fa tsy misy fiovana ny nahazatra tany amin’ny ampolo taona maro lasa.
Amin’izao vokatra aondrana izao, mitaky fepetra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ireo mpandraharaha. Voankazo masaka tsara, tsy misy pentina, hitazonana ny lazan’ny vokatra letisia avy eto Madagasikara. Manampy ny avy eto an-toerana ny fijanonan’ireo sambo mitondra ny vokatra mankany Eoropa. Haharitra efatra andro ireo sambo ireo ao Toamasina, raha roa andro teo aloha. Haingana ny fahatongavan’ireo sambo ireo any Eoropa, 12 hatramin’ny 21 andro, raha naharitra iray volana mahery tany aloha. Koa tsy maninona raha letisia efa masaka tsara no miainga eto, manome vokatra tsara kalitao, araka ny fanamarihan’ireo mpandraharaha mpanondrana.
Mpamokatra letisia betsaka koa, i Afrika Atsimo sy ny any amin’ny faritra azia. Koa mila maharaka fifaninanana isika, araka ny fepetra takin’ireo mpandraharaha. Ankoatra ny any Eoropa hanondranana ny 70 %, tsena vaovao hitan’ireo mpandraharaha koa izao ny any Rosia, Etazonia, sy Arabie Saoudite.